Dadka: "Gabadhani waxay ciyaartaa xanaaq!" : Jade Hallyday Soo jiidashada isticmaaleyaasha shabakadda ka dib xafladda asxaabtiina - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Gabadhani waxay ciyaartaa jahwareer!”: Jade Hallyday waxay ka xanaaqday shabakadaha kadib markii ay la wadaageen asxaabteeda.
Hada St. Barthelemy, Jade Hallyday wuxuu ku raaxeysanayaa fasaxa xagaaga sida midka weyn. Ka dib markii uu u dabaaldegay sannadkiisii ​​15 sano ka hor, gabadha korsashada Johnny Hallyday waxay ku raaxeysataa inay la yeelato asxaabteeda, oo uu ku jiro ina Yannick Nuux.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 19 YuL 2019 ee 11: 42 PDT
Dhawaan, saaxiibada Jade waxay wadaageen dhowr fiidiyow ah sheekadooda Instagram. Sawirada sawirada, dhalinyaro waxay ku raaxeystaan ​​goob lagu caweeyo. Waxaan kaloo arki karnaa qoob-ka-ciyaarka Jade, oo xiranaya dhar gaduud dheer.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 19 Yuun 2019 ee 6: 19 PDT
Fiidiyowyada da 'yarta waxay ku buuxiyeen shabakadda. Netizens si daran ayey u leeyihiin dhaleeceeyay Caruurta iyo waalidkood dhaqan xumada Jade ee "si ula kac ah u kicisa muranka si ay u soo jiitaan dareenka":
HORROR !!! Gabdhahan waxay u samaysan yihiin sida “baabuurta la xaday” dhamaantood waxay leeyihiin hooyooyinka xilkasnimada leh da’dooda waa laga mamnuucay sanaadiiqda
lolitas-ka dhibta leh ... waa ballan qaad
Laakiin muxuu badbaadinta ilmaha sameeyaa? Gabadhan way qaldanaan doontaa.
Naqdiyey sidii hooyo oo kale si loo helo in gabadhan ay ciyaareyso kacsi isla markaana si ula kac ah u kiciso muranka si ay u soo jiidato dareenka. Waa maxay waxbarashada hooyadeed siisaa? Way fiicnaan laheyd inay iyada ilaaliso iyadoo gacanta ku heysa qoraallada gabadheeda.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 12 May 2019 ee 12: 25 PDT
Tani maahan markii ugu horreysay oo gabadha Laeticia Hallyday ay ka xanaaqdo dadka isticmaala internetka. Intii lagu jiray fiidnimadii dhawaa, Joy iyo walaasheeda weyn ayaa lagu dhalleeceeyay inay si qaawan u ...
Публикация от Gossip Dabaaldheer (@ gossip.celebrites) 12 AUG 2019 ee 12: 29 PDT
Maxaad u aragtaa dhaqankooda? Ma raacsan tahay adeegsadayaasha? Fikradaada kula wadaag faallooyinka.